May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၃၁)
အမရေ- ပျော်စရာ မပါ လို့တဲ့လား။
ဘ၀ ဆိုတာ ထိုးဇတ် တပုဒ်မှ မဟုတ်တာ။
ဟိုတနေ့ကတောင် ကိုနေလင်းဆီ စာရေးပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဆရာမတို့ကို မြန်မြန် အင်တာနက် ဆင်ပေးလိုက်တော့ဟာ လို့။ စာတွေ ဖတ်ချင်လှပြီလို့။
မွန်းကြပ်သွားပြီ ဆရာမရေ။ ရွှေမြိုင်မှာပဲ နေတော့မယ် သီချင်းဆိုလိုက်တော့မယ်။ :)
ဘဝဆိုတာ အင်းပေါ့လေ ဘဝဆိုတာပေါ့လေ
အင်း အမလဲ အရွယ်နဲ့သောက မမျှခဲ့ပါလားနော်
ဆရာမ.. မျှော်နေတာ ကြာလှပါပြီ။ အလုပ်ရှုပ်နေလား နေမကောင်းလို့လား လို့။ မြသီလာစောင့်ဖတ်ရင်း...
ဆရာမ ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို စိတ်ဝင်စားစွာ
ဖတ်ရူသွားပါတယ်။ အပိုင်း(၃၂) ကို မျှော်လင့်
ချိုသင်းတော့ မမြည်းခိုင်းနဲ့ ဆရာ ..
မနက်က တီချယ်ကြီး ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ကြည့်တာ
တခုခု ဖြစ်ရင် နှမြောစရာ၊
It is happy ending!
Wishing you and ko yar kyaw be fine in new place.
လာကြည့်ပြီးဖတ်မရလို့မခင်မင်းဇော်ဆီမှာတောင် အော်ခဲ့သေးတယ်ဆရာမရေ ။ မျှော်နေတာ ကြာပါပြီ
အမယ်..ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ ငထက်က ငါ့ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အားနည်းချက်ကို နှိမ်တယ်ပေါ့လေ..တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ၊ နင့်ဆီလာလည်မှ အ၀ စားပစ်မယ် :D